Fivorian'ny birao boribory - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Circuit- Assembly Board - PCBFuture
Teny lakile: fivoriambe PCB, Fivorian'ny SMT PCB, Serivisy turnkey, fivorian'ny birao boribory
Ny mpanjifa lehibe PCBFuture dia avy amin'ny mpanamboatra salantsalany amin'ny sehatry ny elektronika mpanjifa, vokatra niomerika, fifandraisan-davitra tsy misy tariby, fitantanana indostrialy sy mandeha ho azy, fitsaboana ara-pahasalamana, sns. Ny tobin'ny mpanjifantsika mafy orina dia manome tosika lehibe ho an'ny fampandrosoana ny orinasa amin'ny ho avy.
Fa maninona no mifidy ny serivisy fivoriamben'ny faritra?
1.Quick Turn prototype sy famokarana betsaka PCB
Nanokana ny famokarana haingam-pandeha 1-28layer, prototype ary famokarana PCB avo lenta avo lenta izahay miaraka amin'ny fitsipiky ny "kalitao tsara indrindra, ny vidiny ambany indrindra ary ny fotoana fandefasana haingana indrindra"
2.Fahaizana manamboatra OEM matanjaka
ny toeram-pamokarana misy antsika dia misy atrikasa madio sy tsipika SMT efatra efa mandroso. Ny fametrahana marina antsika dia mety hahatratra ny chip + 0.1MM amin'ny faritra mihodina, izay midika fa afaka mitantana saika ny karazan-tsivana mitambatra, toy ny SO, SOP, SOJ, TSOP, TSSOP, QFP ary BGA. Ho fanampin'izay, afaka manome 0201 puce fametrahana amin'ny alàlan'ny lohan-tsokajy sy famokarana vokatra vita isika.
3.Natao hanatsarana ny kalitaon'ny vokatra
Manolo-tena hanatsara ny kalitaon'ny PCB izahay. Ny fiasanay dia nandalo ny ISO 9001: 2000-voamarina, ary ny vokatray dia nahazo marika CE sy RoHS. Ho fanampin'izay, mangataka QS9000, fanamarinana SA8000 izahay.
4. Ara-dalàna 1 ~ 5 andro ho an'ny fivoriambe PCB fotsiny; 10 ~ 16 andro ho an'ny fivorian'ny PCB turnkey.
1.PCB famatsiana sy ny fametrahana
Fitsapana 3.X-ray AOI
4.Fivorian'ny vokatra farany
6. Serivisy fonosana sy logistika ary serivisy aorian'ny fivarotana
7. avy amin'ny filozofia famokarana amin'ny alàlan'ny fivoriambe PCB, fizarana singa, fampidirana vokatra vaovao, fitsapana PCB, fiantohana sy fanamboarana ary lozisialy.
Singa fototra ilaina amin'ny fivorian'ny fizaran-tany pirinty:
Birao boribory vita pirinty: Io no tena takiana amin'ny fizotry ny fivoriambe.
Fitaovana elektronika fototra: Mila ny singa elektronika rehetra ianao toy ny transistors, diode ary resistors.
Fitaovana fanamafisam-peo: Ny fitaovana dia misy feta vita amin'ny solder, bara vita amin'ny solder ary tariby solder. Mila baolina solder sy solder koa ianao. Flux dia fitaovana iray hafa manosotra lehibe.
Fitaovana fanamafisam-peo: Ity fitaovana ity dia misy milina fametahana onja sy toera fametahana. Ianao koa dia mila ny fitaovana ilaina SMT sy THT ilaina rehetra.
Fitaovana fanaraha-maso sy fitsapana: Ilaina amin'ny fanaraha-maso ny fahaizan'ny asa sy ny fahamendrehan'ny fivorian'ny birao ny fitaovana fitsapana.
Ny fotoana itarihana ny fivorian'ny PCB:
Miankina amin'ny filaminana ny fotoana itarihana. Miaraka amin'ny loharanom-pahalalantsika sy ny traikefantsika, ny fotoana fivoriantsika mahazatra dia eo anelanelan'ny 24 ora sy 1 herinandro. Ny fotoana dia hiova arakaraka ny fahasarotan'nyfivorian'ny birao vita pirinty. Mety haharitra kokoa ny famolavolana manokana.
Nandritra ny taona maro, PCBFuture dia nanangona PCBFuture maro an'isa famokarana, Production ary debugging traikefa, ary miantehitra amin'ireto traikefa ireto, manome andrim-pianarana fikarohana siantifika lehibe sy mpanjifa orinasa lehibe sy salantsalany miaraka amina endrika tokana, fantsona ary fanafoanana ny ny tabilao vita printy misy sosona avo lenta sy azo itokisana, manomboka amin'ny santionany ka hatrany amina andiany Io karazana serivisy io dia be mpampiasa amin'ny indostria isan-karazany toy ny serasera, ny seranam-piaramanidina sy ny fiaramanidina, ny IT, ny fitsaboana, ny tontolo iainana, ny herinaratra ary ny fitaovana fitiliana.